नेपाल र उज्वेकिस्तान उपाधिका लागि भिड्दै, आज पनि नायक बन्लिन् त साम्बा ? - Lokpath Lokpath
२६ भाद्र २०७६, बिहीबार १०:५८
नेपाल र उज्वेकिस्तान उपाधिका लागि भिड्दै, आज पनि नायक बन्लिन् त साम्बा ?
प्रकाशित मिति : २६ भाद्र २०७६, बिहीबार १०:५८
काठमाडौं । किर्गीस्तानमा जारी सादेझ्दा कप फुटबल प्रतियोगिताको फाइनलका लागि आज नेपालले उज्वेकिस्तानको सामना गर्दैछ ।
काराकोलस्थित सेन्ट्रल स्टेडियममा हुने खेल नेपाली समय अनुसार अपरान्ह पौने ४ बजे सुरु हुनेछ । नेपाल पहिलो पटक फाईनल सम्मको यात्रा तय गरेको हो ।
तर फाईनलमा नेपालले फिफा वरियतामा आफुभन्दा निकै माथि रहेको उज्वेकिस्तानसंग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ । फिफा बरियतमा नेपाल १ सय १ औ र उज्वेकिस्तान ४४ औ स्थानमा रहेको छ ।
पहिलो पटक अन्तराष्ट्रिय उपाधि जित्ने अभियानमा रहेको नेपाललाई समुह चरणमा उज्वेकिस्तानसंग ब्यहोरेको हारको बदला लिने अवसर समेत प्राप्त छ ।
समुह चरणको खेलमा उज्वेकिस्तानले नेपाललाई २-० ले हराएको थियो । गोलरक्षक र डिफेन्डरले बारम्बार गल्ती गर्दा नेपाल पराजित हुन पुगेको थियो ।
Tags: नेपाल र उज्वेकिस्तान भिड्दै, साम्बा